Composite umfutholuketshezi Cindezela, Smc umfutholuketshezi Cindezela, Deep Drawing Cindezela - Zhengxi
Imikhiqizo eyinhloko yenkampani, njengezinhlanganisela zemishini ye-hydraulic, imishini yokuqina eqine [...]Funda kabanzi
Ukugxila kwimishini ye-hydraulic peripheral imishini ezenzakalelayo kanye neworkshop engenamuntu.Funda kabanzi
Ukugxila kusevisi yokuthengisa ngemuva kokuthengisa Sekela ukunikezwa kwezingxenye zokungasebenzi. Bonke abasebenzi benkampani [...]Funda kabanzi
Chengdu Zhengxi umfutholuketshezi
Igcine ukubambisana okuseduze namanyuvesi amaningi aziwayo asekhaya kanye nezikhungo zocwaningo isikhathi eside futhi izibophezele ekubeni yiphayona lobuchwepheshe embonini yomshini wokubacindezela.
Inhlanganisela ye-SMC BMC wokubacindezela ...
4 ikholomu umdwebo ojulile hydra ...
Okuzenzakalelayo Ferrite Magnetic ...
Okuzenzakalelayo SMC Production Li ...
Isitshalo 1: 9000SQM Isitshalo 2: 48000SQM
Cishe umuntu ongu-150
Amasethi angaphezu kwama-60
Lokukhipha Machine Inani ngo-2017
Inqubo enkulu futhi ephelele yokwenza imishini esifundazweni saseSichuan
Chengdu Zhengxi umfutholuketshezi Izinsiza kusebenza Ukukhiqiza Co., Ltd.isendaweni enhle Qingbaijiang Free Trade Zone of Chengdu. Le nkampani ihlanganisa indawo engamamitha-skwele angama-45,608, kufaka phakathi indawo yokusebenzela enzima engama-30,400 metres ayisikwele. Kungumkhiqizi omkhulu wezisebenzi zemishini yokubacindezela eChina. Le nkampani ine onjiniyela ezingaphezu kuka-100 kanye nochwepheshe kanye inqwaba kazwelonke okusungula patent. Igcine ukubambisana okuseduze namanyuvesi amaningi aziwayo asekhaya kanye nezikhungo zocwaningo isikhathi eside futhi izibophezele ekubeni yiphayona lobuchwepheshe embonini yomshini wokubacindezela.
UChengdu Zhengxi umkhiqizi womshini wokubacindezela osebenzisa ngokugcwele uhlelo lwekhwalithi le-ISO9001 futhi usebenzisa ngokuqinile ukuhlolwa ezintathu ekukhiqizeni, okungukuthi ukuhlolwa kwempahla eluhlaza, ukuhlolwa kwenqubo, nokuhlolwa kwefektri; izinyathelo ezinjengokuzihlola, ukuzihlola, nokuhlolwa okukhethekile nazo zamukelwa kwinqubo yokusakazwa komkhiqizo ukuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo. Qiniseka ukuthi imikhiqizo engahambisani nayo ayishiyi ifektri. Hlela ukukhiqizwa ngokuhambisana nezidingo zomsebenzisi kanye namazinga afanele kazwelonke, unikeze ngemikhiqizo, futhi uqinisekise ukuthi imikhiqizo enikeziwe iyimikhiqizo emisha nengasetshenziswanga, futhi yenziwa ngezinto zokusetshenziswa ezifanele kanye nobuchwepheshe obuthuthukile ukuqinisekisa ukuthi ikhwalithi yomkhiqizo, ukucaciswa nokusebenza kuyahambisana izidingo zomsebenzisi. Izimpahla zizothuthwa ngendlela efanele, futhi ukupakisha nokumakwa kuzothobela amazinga kazwelonke nezidingo zomsebenzisi.